कोरोनाका बिरामी बढ्दै गएपछि आजबाट सरकारले जारि गर्यो ७७ जिल्लामा यस्तो सूचना, घरबाहिर ननिस्कनु होला ! – Namaste Dainik
May 3, 2020 NamastedainikLeaveaComment on कोरोनाका बिरामी बढ्दै गएपछि आजबाट सरकारले जारि गर्यो ७७ जिल्लामा यस्तो सूचना, घरबाहिर ननिस्कनु होला !
कोरोनाका बिरामी बढ्दै गएपछि आजबाट सरकारले जारि गर्यो ७७ जिल्लामा यस्तो सूचना,घरबाहिर ननिस्कनु होला !
‘लकडाउन’लाई थप कडा पार्न गृहमन्त्रालयले मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएको छ । मन्त्रालयले सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई आज परिपत्र गर्दै पासविनाका कुनै पनि सवारी साधन आवतजावतमा रोक लगाउन निर्देशन दिएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । बीचबाटोमा पुगेका र विचल्लीमा परेका मजदूर र सर्वसाधारणलाई उद्धारका लागि साँझको समयमा केही दिन सवारी सञ्चालनमा अनौपचारिकरुपमा खुकुलो गराइएकाले अधिकांशको उद्धार भइसकेको गृह मन्त्रालयको ठहर छ । त्यसैले मन्त्रालयले आजदेखि पासविनाका सबै प्रकारका सवारी साधन सञ्चालनमा रोक लगाउन भनेको हो ।
सोमबार गृह मन्त्रालयले ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुलाई परिपत्र गर्दै पासबिनाका कुनै पनि सवारीसाधनलाई आवतजावतमा रोक लगाउन निर्देशन दिएको छ। यसैबीच गृह मन्त्रालयले अत्यावश्यक सेवा बाहेकका सवारी साधनलाई पास वितरण नगर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुलाई पुन:निर्देशन दिएको छ । पासको दुरुपयोग गरेर मानिसको भीडभाड बढेको भन्दै गृहले त्यसलाई कडाइ गर्न निर्देशन दिएको हो । सवारीसाधनमा हुलमुलका साथ यात्रा गर्दा कोरोना संक्रमणले थप जटिलता निम्ताउन सक्ने भएकोले कडाइ गरिएको गृहको भनाइ छ।
हुलमूलका साथ सवारी साधनमा यात्रा गर्दा कोभिड–१९ सङ्क्रमण भएर थप जटिलता निम्त्याउनसक्ने खतरालाई ध्यानमा राखेर उक्त निर्देशन दिइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । लकडाउनलाई सरकारले वैशाख २५ गतेसम्म लम्ब्याएको छ । अहिलेसम्म मुलुकमा ५२ जनामा कोभिड– १९ सङ्क्रमण पुष्टि भइसकेको छ । लामो लकडाउनका कारण सर्वसाधारणले खुकुलो बनाउने आशा बोकेको बेला मन्त्रालयको यो सूचनासंगै अझ केहि दिन घरभित्रै बसी सरकारलाइ सहयोग गर्नुपर्ने भएको छ ।
यी हुन् २६ गतेपछि लकडाउन खुल्ने र नखुल्ने क्षेत्र ।